ဘယ်အရောင်ကြိုက်သလဲမေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကို အကဲခတ်ကြမယ်
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ပြောလိုက်တဲ့ စိတ်သဘောထား
14 Sep 2018 . 4:14 PM
လူတွေဟာ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအရောင်အပေါ် မူတည်ပြီး စိတ်နေသဘောထား ၊ ပင်ကိုစရိုက်တွေ မတူညီကြပါဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့တွေက အဖြူရောင်ကို ကြိုက်တယ် ၊ တချို့တွေက အဝါရောင် စသဖြင့် အကြိုက်ချင်း မတူညီနိုင်ပါဘူး။ အကြိုက်ဆုံးအရောင်အပေါ် မူတည်ပြီး စိတ်သဘောထားကွဲပြားသွားတာကို ဗဟုသုတဖြစ်ရလေအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အနက်ရောင်ကိုများ စွဲလမ်းမိပြီဆို ဘောင်းဘီဝယ်တာ ၊ ဖိနပ်ဝယ်တာကအစ အနက်ရောင်ကိုမှ ရွေးပြီး ဝယ်တတ်ကြပါတယ်။ အနက်ရောင်သမားတွေကတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူတွေ ၊ အသစ်အဆန်းကို ဖန်တီးလိုစိတ်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်လေ့ရှိပြီး သူ့ကို “သေးသေးသွားတင်ရင် လုံးကြီးတင်ရုံသာမက အဆံပါခတ်”လေ့ရှိကြပါတယ်။
အပြာရောင်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ အသန့်အပြန့် ကြိုက်သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို အဓိကထားကြပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ယုံကြည်လေးစားခြင်းကို ခံယူထားတဲ့သူများဖြစ်ပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တဲ့အပြင် သစ္စာစောင့်သိကြပါတယ်။
အားငယ်သူကို သနားလိုစိတ်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အမြဲတမ်းပေးဆပ်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရမ်းနုရောင်ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး မာနလည်း ကြီးတတ်ပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်လိုစိတ်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေးစားကြပါတယ်။
ပန်းရောင်ကို စွဲလမ်းတဲ့သူတွေဟာ စိတ်နှလုံး နူးညံ့လေ့ရှိပြီး သနားကြင်နာလိုစိတ်ရှိကြပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေ ဖြစ်ပြီး ရယူလိုစိတ်ထက် ပေးဆပ်ဖို့ အားသန်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူအတွက် ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းလိုစိတ်ရှိတဲ့ သစ္စာရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့အပြင် ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကြသူတွေဟာ ဘဝမှာ ကံအကောင်းဆုံးလူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေးပြီး မွေးဖွားလာရတဲ့အပြင် မရှိစကား မကြားရလောက်အောင် အတိတ်ကံကောင်းကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်ကို နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဟာ ပညာရပ်ကို လေ့လာဖို့ ဝါသနာထုံကြပြီး ငယ်သားတွေအတွက် ပြန်လည်ဝေငှလိုစိတ် ကြီးမားကြပါတယ်။
အဝါရောင်သမားတွေဟာ အများအားဖြင့် ကျောင်းဆရာတွေ ၊ ပါမောက္ခတွေ ဖြစ်ကြပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။
အညိုရောင်ကို နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဟာ အဖော်မင်ကြပြီး သစ္စာစောင့်သိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရင်း တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကို နှစ်သက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဖြူရောင်သမားတွေဟာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နေတတ်ကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဗရုတ်ကျတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တိုတောင်းတဲ့လူ့ဘဝမှာ အလှဆုံးပြုံးထားရင်း အသက်ဆက်လိုစိတ်ရှိကြပါတယ်။
မီးခိုရောင်သမားတွေဟာ ဆန့်ကျင်လိုစိတ်နည်းပါးပြီး အစွန်းနှစ်ဖက်ကြားမှ ကြားနေဝါဒီတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဝေဖန်သံတွေကို ရှောင်ရှားရင်း သီးခြားနေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။
လက်တွေ့ဆန်သူများဖြစ်ကြပြီး လူအများမှ အာရုံစိုက်ခံရခြင်းကို အလိုမရှိပါဘူး။ သာမန်လူတစ်ယောက်လို ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ ကဲ . . . ဒီအချက်တွေက နှစ်သက်တဲ့အရောင်ကို မူတည်ပြီး စိတ်နေသဘောထား ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့်မမှန်နိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် တချို့အချက်တွေကတော့ သွေးထွက်အောင် မှန်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Color Crazy သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လက်တို့ပြောလိုက်ကြဦးနော်။
ကိုယျ့အကွိုကျဆုံးအရောငျက ပွောလိုကျတဲ့ စိတျသဘောထား
လူတှဟော ကိုယျအကွိုကျဆုံးအရောငျအပျေါ မူတညျပွီး စိတျနသေဘောထား ၊ ပငျကိုစရိုကျတှေ မတူညီကွပါဘူးလို့ ဆိုကွပါတယျ။ တခြို့တှကေ အဖွူရောငျကို ကွိုကျတယျ ၊ တခြို့တှကေ အဝါရောငျ စသဖွငျ့ အကွိုကျခငျြး မတူညီနိုငျပါဘူး။ အကွိုကျဆုံးအရောငျအပျေါ မူတညျပွီး စိတျသဘောထားကှဲပွားသှားတာကို ဗဟုသုတဖွဈရလအေောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
အနကျရောငျကိုမြား စှဲလမျးမိပွီဆို ဘောငျးဘီဝယျတာ ၊ ဖိနပျဝယျတာကအစ အနကျရောငျကိုမှ ရှေးပွီး ဝယျတတျကွပါတယျ။ အနကျရောငျသမားတှကေတော့ ဆတျဆတျထိမခံသူတှေ ၊ အသဈအဆနျးကို ဖနျတီးလိုစိတျရှိသူတှဖွေဈပါတယျ။
တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေး နတေတျလရှေိ့ပွီး သူ့ကို “သေးသေးသှားတငျရငျ လုံးကွီးတငျရုံသာမက အဆံပါခတျ”လရှေိ့ကွပါတယျ။
အပွာရောငျကို နှဈသကျတဲ့သူတှဟော အသနျ့အပွနျ့ ကွိုကျသူတှဖွေဈပွီး တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးကို အဓိကထားကွပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြမှ ယုံကွညျလေးစားခွငျးကို ခံယူထားတဲ့သူမြားဖွဈပွီး အေးဆေးတညျငွိမျသူမြား ဖွဈကွပါတယျ။
အစိမျးရောငျကို ကွိုကျတဲ့သူတှဟော ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုဆကျဆံတတျတဲ့အပွငျ သစ်စာစောငျ့သိကွပါတယျ။
အားငယျသူကို သနားလိုစိတျရှိပွီး ပတျဝနျးကငျြအတှကျ အမွဲတမျးပေးဆပျနတေဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။
ခရမျးနုရောငျကို ကွိုကျတဲ့သူတှဟော ဉာဏျရညျမွငျ့မားပွီး မာနလညျး ကွီးတတျပါတယျ။
စှနျ့ဦးတီထှငျလိုစိတျရှိပွီး ပတျဝနျးကငျြကို လေးစားကွပါတယျ။
ပနျးရောငျကို စှဲလမျးတဲ့သူတှဟော စိတျနှလုံး နူးညံ့လရှေိ့ပွီး သနားကွငျနာလိုစိတျရှိကွပါတယျ။ စိတျကူးယဉျသမားတှေ ဖွဈပွီး ရယူလိုစိတျထကျ ပေးဆပျဖို့ အားသနျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။
ခဈြသူအတှကျ ရိုးမွကေပြေါငျးသငျးလိုစိတျရှိတဲ့ သစ်စာရှငျကွီးမြားဖွဈတဲ့အပွငျ ဝမျးနညျးမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကွသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
အနီရောငျကို နှဈသကျမွတျနိုးကွသူတှဟော ဘဝမှာ ကံအကောငျးဆုံးလူမြား ဖွဈကွပါတယျ။
ရှလေငျပနျးနဲ့ အခငျြးဆေးပွီး မှေးဖှားလာရတဲ့အပွငျ မရှိစကား မကွားရလောကျအောငျ အတိတျကံကောငျးကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။
အဝါရောငျကို နှဈသကျကွတဲ့သူတှဟော ပညာရပျကို လလေ့ာဖို့ ဝါသနာထုံကွပွီး ငယျသားတှအေတှကျ ပွနျလညျဝငှေလိုစိတျ ကွီးမားကွပါတယျ။
အဝါရောငျသမားတှဟော အမြားအားဖွငျ့ ကြောငျးဆရာတှေ ၊ ပါမောက်ခတှေ ဖွဈကွပွီး ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွတျသနျးကွပါတယျ။
အညိုရောငျကို နှဈသကျကွတဲ့သူတှဟော အဖျောမငျကွပွီး သစ်စာစောငျ့သိသူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးရငျး တညျငွိမျတဲ့ဘဝကို နှဈသကျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။
အဖွူရောငျသမားတှဟော ပြျောပြျောပါးပါး နတေတျကွပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဗရုတျကတြတျသူတှဖွေဈပါတယျ။
တိုတောငျးတဲ့လူ့ဘဝမှာ အလှဆုံးပွုံးထားရငျး အသကျဆကျလိုစိတျရှိကွပါတယျ။
မီးခိုရောငျသမားတှဟော ဆနျ့ကငျြလိုစိတျနညျးပါးပွီး အစှနျးနှဈဖကျကွားမှ ကွားနဝေါဒီတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ ဝဖေနျသံတှကေို ရှောငျရှားရငျး သီးခွားနထေိုငျတတျကွပါတယျ။
လကျတှဆေ့နျသူမြားဖွဈကွပွီး လူအမြားမှ အာရုံစိုကျခံရခွငျးကို အလိုမရှိပါဘူး။ သာမနျလူတဈယောကျလို ဘဝကို ရိုးရှငျးစှာ ဖွတျသနျးကွပါတယျ။ ကဲ . . . ဒီအခကျြတှကေ နှဈသကျတဲ့အရောငျကို မူတညျပွီး စိတျနသေဘောထား ဆုံးဖွတျတာဖွဈပါတယျ။ ရာနှုနျးပွညျ့မမှနျနိုငျဘူးဆိုပမေယျ့ တခြို့အခကျြတှကေတော့ သှေးထှကျအောငျ မှနျနတောကို တှရေ့မှာပါ။ Color Crazy သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး လကျတို့ပွောလိုကျကွဦးနျော။